အမှတ်တရလေးများ: မေတ္တာရှင်ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(ရွှေပြည်သာ)တရားပွဲကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပါမည်။
မေတ္တာရှင်ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(ရွှေပြည်သာ)တရားပွဲကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပါမည်။
ယနေ့ညနေ(၆း၀၀နာရီ) မှ (၉း၀၀)နာရီအထိ စင်္ကာပူနိုင်ငံ The Arena Country Club တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော မေတ္တာရှင်ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(ရွှေပြည်သာ)၏ တရားပွဲများကို အောက်ပါလင့်ခ်များမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် တရားတော် နာယူနိုင်ကြစေရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။"lotusdhammalivedhammamyaseintaungdhammadownloadအဖြူရောင်သံစဉ်အလှူတကာ့အလှူတွင် တရားအလှူသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။လေးစားစွာဖြင့်-၀ါဝါခိုင်မင်း'
ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်) မှ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ရွှေ့ပြောင်းလာသူများကို ငွေကျပ် ၄၁ သိန်းလှူဒါန်းကြပြီ
ရခိုင်သဟာယ အသင်း (ရန်ကုန်)မှ မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပိုင်း ကျေးရွာ (၅)
ရွာသို့ ရောက်ရှိခိုလုံနေကြသူ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ မိသားစု ၁၁၄ စု အတွက် ငွေကျပ် (၄၁)...
credit to : Kaung Myat
၁.Dr.ထိန်ဝင်း (လစဉ် - ၁၅,၀၀၀ ကျပ်)(2013 April)
၂.Dr.အောင်မင်းရွှေ (လစဉ် - ၁၅,၀...
Number of View: 325 စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဆရာနှင်ကျွန်မ ဆုံဆည်းမှုက စာပေကိစ္စရပ်များမှ စတည်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ဆရာ့၏အမေရိကန်စကားပြောသင်တန်းတွ...
Welcome To SAKURA Fashion Opening Ceremony on 1st ...
မမေဖြိုးအောင် (စင်္ကာပူ)မှ မွေးနေ့အလှူ ကုသိုလ်ပြုခြင...
ကိုရန်နိုင်+မသီတာ (စင်္ကာပူ)မှ မသီတာမွေးနေ့အလှူ (၂၅....
ကိုမောင်သက်+မဝေေ၀စိုး မိသားစု(မူဆယ်မြို့)မှ အရုဏ်ဆ...
ဇွန် ၂၂ ရက်နေ့မွေးနေ့ရှင် ကိုစိုးဝေယံမိုးထက်(စင်္ကာပ...
မငယ်ငယ်ရှိန် (USA) မှ မွေးနေ့အမှတ်တရ ကုသိုလ်ပြုပွဲ...
ကွယ်လွန်သူ ဦးမှိုင်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်အေးမိ မိသားစု ...
ကိုထွန်းမြင့်အောင် +မဆုဝေဖြိုး (စင်္ကာပူ)မှ မဆုဝေဖြိ...
ယာနယာဉ်+ယာနယာဉ်အမိုး+ခြေနင်းခုံ+ခုံတန်း ၂ခု+ လစဉ်ဆ...
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း (၃ )နှစ်ပြည့် အ...
မလေးရှားမှဓမ္မမိတ်ဆွေများ နှင့် တရားချစ်ခင်သူတော်စင...
မအေးအေးစော(ဂျပန်)၏ မွေးနေ့အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ နှင့် ရာသ...
ကွယ်လွန်သူဖခင်ဦးတင်အောင်နှင့် မိခင် ဒေါ်ညွန့်ညွန့်...
ကိုသက်မြင့်ဦး + မကေသီလွင်၊ သမီး-လွင်မာမင်း မိသားစ...
ဦးလှဘုန်းမြင့် + မချိုမော်ဟန်၊ သမီး- သဲသက်ဇွန်၊ စ...
မေတ္တာရှင်ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(ရွှေပြည်သာ)တရားပွဲကို တို...
မေတ္တာရှင်ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န နဲ့ ဇွန်လစင်္ကာပူ၊မလေးရှား...
ဆရာတော် အရှင်ဇဝန (မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ) တရားပွဲဖြစ်...
ဦးထွန်းအောင်ကျော်+ဒေါ်ခင်မာလာဝေ၊ သမီး- ရွှန်းမြတ်ဆု...
မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး(မလေးရှား)၏ အရုဏ်ဆွမ်းအလှူ နဲ့ ရ...
ဇွန်လ ၁၀ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌ ကျင်းပြ...